Jubbaland oo Duuleedka Kismaayo ka hirgelisay guryo loogu talo galay dadka kasoo laabanaya Xeryaha Qaxootiga Kenya – Radio Muqdisho
Jubbaland oo Duuleedka Kismaayo ka hirgelisay guryo loogu talo galay dadka kasoo laabanaya Xeryaha Qaxootiga Kenya
Dowlad Gobolleedka Jubbaland oo kaashaneysa hay’adaha ka shaqeya arrimaha aadanaha iyo hormarinta ayaa duleedka magaalada Kismaayo ka hirgaliyay guryo loogu talo galay muwadiniinta Soomaaliyeed ee kasoo noqonaya xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Dowlad goboleedka Jubbaland oo mar kale qiimeyn ku sameysay baahiyaha adeegyada aas-aasiga ayaa waxaa soo baxday in loo bahan yahay xarumo caafimaad oo loo dhiso dadka degaya xaafada cusub ee duleedka magaalada.
Wasiir kuxiggenka caafimadka Jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ayaana maanta wada jir u dhagax dhigay xaruntii ugu horeysay oo caafimad,waxaan ku wehliyay hay’adaha ka shaqeya horumarinta.
Gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa sheegay in dowlada hoose ay xooga saari doonta sidii loo heli laha adeegyada aas-aasiga guud ahaan degmada gaar ahaan xafada cusub ee duleedka magaalada oo loo dhisay dadka dib uga soo laabanaya xerayaha qaxootiga.
Dhismaha xaruntaan ayaa waxaa gacanta ku haysa hay’ada Merced crop waxaana maalgalinaya hay’ada GIS Cabdirashiid caafi oo ah madaxa hay’ada Merced crop kismaayo ayaa sharaxad ka baxshay xarunta iyo cida maamuli doonta.
Wasiir kuxigeenka caafimadka Jubbaland Cali Nuur ayaa sheegay in dowlad gobolleedka Jubbaland ay ilaalin doonto caafimadka muwaadinka Soomaaliyeed .
Sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay hay’adaha ka shaqeya arrimaha caafimadka in ay ka qayb qaatan hirgalinta xarumo kale.
Shaqaalaha Wasaaradda Amniga oo loo Furay tababar kor loogu qaadayo Xirfadooda (Sawirro).
Wasaaradda Haweenka oo daah furtay ololaha ka hortagga tacadiga ka dhanka ah Jinsiga